Archive du 20180511
Kianja 13 mey Nisy nitoraka baomba
Nisy nitoraka tamin’ny baomba vita tanana miisa 6 na itony antsoina hoe :”cocktail Molotov” itony ny lapihazo fikabarian’ireo solombavambahoaka ho an’ny fanovana etsy amin’ny kianja 13 omaly alakamisy 10 mey tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany maraina.
Vondrona Eoropeanina “Atao ao anatin’ny fitoniana ny fifidianana”
Manoloana ny fanambarana nataon`ny CENI Madagascar mahakasika ny tokony handraisan`ny rehetra fanapahan-kevitra haingana sy fepetra mazava mikasika ny fifidianana ny talata lasa teo dia naneho ny heviny mahakasika izany ny teo anivon`ny Vondrona Eoropeanina (UE).
Fanelanelana amin’ny krizy Manaboribory resaka i Chissano
“Tsy marina ny filazana fa ny vondrona iraisam-pirenena no nametraka ny “ni…ni”. Raha te hahafantatra ny marina ianareo momba azy io dia iray tamin`ireo mpandray anjara fototra tamin`izany fotoana no nilaza taminay hoe afaka tsy milatsaka hofidiana aho raha tsy milatsaka hofidiana ny ao an-kilany.
Pastera Mailhol Miantso ny filoha Rajaonarimampianina mba hiala …
Namoaka ny heviny mikasika ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny ny alarobia 9 mey teo, ny pastera Mailhol mpitarika ny Fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara (FAM). Ao ny andro hanginana, ao ny andro hitenenana, hoy izy.
Didier Ratsiraka Miandrandra tetezamita
« Fampihavanana aloha, fifidianana aoriana. ». Anisan’ny fehezantenin’ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka io nandritra ny fankalazana ny faha-42 taonan’ny antoko Arema teny Faravohitra ny 25 martsa teo.
Kandida lehibe amin’ny fifidianana Efa miomana amin’ny “Plan B”
Na inona na inona fizotry ny toe-draharaha politika eo, dia inoana fa efa manana ny planina faharoa na “plan B” avokoa ny mpanao politika, indrindra fa ireo sokajiana ho kandida vaventy amin’ny fifidianana.
Mpianatra mivoaka mamonjy grevy Misy ireo manaraka mpampianatra, misy ireo havoakan’ny sasany
Somary nahazo vahana teto an-drenivohitra tamin’ity herinandro ity ny famoahana mpianatra any an-dakilasy mandeha manatevina ny tolona tanterahin’ireo solombavambahoaka 73 mianadahy ho amin’ny fanovana eny amin’ny kianja 13 mey.
Hono hoy aho ry dada sy neny fa maninona no tsy mianatra ? Tsy misy tonga intsony anie ireo mpampianatra ! -Tsy sitrapony anaka fa teren'ny zava-misy izy ireo, Kely karama sy sakafo ka mba manandram-peo.
Raharaham-panjakana Manomboka mikatso
Roso hatrany dia amin’ny hetsi-panoherana tarihin’ny depioten’ny fanovana. Tsy miato ny tolona, ary tsy miova ny toromarika hatreto, dia ny fialan’ny filoham-pirenena.
Anosipatrana Atsinanana Kely dia miroso amin’ny firaisana ara-nofo ny zazavavy
Kely dia miroso amin’ny fanaovana firaisana ara-nofo ireo zazavavy ao amin’ny fokontany Anosipatrana Atsinanana.
Nafana ny hetsika tao Antsirabe Nisitri-belona ny prefe
Tomefy olona teo anoloan’ny tsangambaton’ny fahaleovantena sy manodidina ny garan’Antsirabe ny alarobia 9 mey teo, izay nanamafisan’ny depiote sy ny vahoaka ny tolona iaraha-manana amin’ny etsy amin’ny 13 mey.
Foibe FJKM Mikarakara hetsika eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina
Mikarakara hetsika eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 12 mey ho avy izao ny foibe Fjkm.
AGO Baolina kitra Malagasy Efa lasa avokoa ny taratasy fiantsoana ireo ligy
Nambaran’ny filoha am-perinasan’ny FMF na Federasion’ny baolina kitra Malagasy,
15 taonan’ny 3Fai Rugby 3 alahady ny lalao etsy Mahamasina
Efa vonona tanteraka ankehitriny ny fikarakarana an’ireo lalao rugby hoentina manamarika ny faha-15 taonan’ny fileovana 3Fai Ambalavao Isotry, hoy Rakotomamonjy Hery Jacques tompon’andraikitra ao aminy. Fantatra fa ao anatin’ny 3 alahady,
Baolina kitra any Amoron’i Mania Mitohy ny dingana faha-2 fiadiana ny ho tompondaka
Tontosa tamin’ny alahady 6 mey teo ny fanombohan’ny dingana faharoa eo amin’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Amoron’i Mania eo amin’ny taranja baolina kitra diviziona nasionaly.
Lalao rugby andro fiakarana na Ascension Nafana ny tetsy amin’ny kianja ANS Ampefiloha
Nafana dia nafana ny lalao rugby nokarakarain’ny Association Firaisankina Mitambatra Atsimondrano tetsy amin’ny kianjan’ny Ans Ampefiloha omaly alakamisy 10 mey andro fiakarana na Ascension tontolo andro.
Fitsaboana maimaimpoana Nanomboka ny talata teny Andavamamba ny hetsiky ny Ahmadiyya
Ny gripa, ny sery, ny kohoka ary ireo karazan’aretina azo avy amin’ny loto amin’ny ankapobeny no tena mahazo antsika Malagasy, raha ny fanazavan-dry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Ahmadiyya izay manatanteraka fitsaboana maimaimpoana etsy Andavamamba nanomboka ny talata teo.
Fifanakalozana ara-barotra eto Afrika Hisy fihenam-bidy 14,3% ireo entana aondrana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia teo tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina ny fivoriana fahatelon’ireo manampahaizana momba ny raharaham-padintseranana aty afrika hanamorana ny fifanakalozana ara-barotra amin’ny samy afrikanina.
Fifanarahana ho fanamorana ny fivezivezen’ny entana Maro ny tombony ara-toekarena entiny
Nisy ny fihaonamben’ny manampahaizana manokana amin’ny fadintseranana eran’i Afrika izay natao teto Madagasikara hametrahana ilay fifampiraharahana entina hanafaingana sy hanamora ny fiveziven’ny entana manerana ny Afrika (AFE).
Mpanao asa tanana Malagasy Misedra olana hatrany
Miankina amin’ny akora fototra hatrany ny vokatra ataon’ny mpanao asa tanana malagasy. Mbola mampitaraina ireo mpisehatra amin’ny asa tanana anefa ny fahalafosan’ny akora fototra, indrindra ireo hafarana.
Nihaona tamin’ireo iraky ny fianakaviambe iraisam-pirenena hanelanelana amin’ny krizy politika misy eto Madagasikara omaly alakamisy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka anisan’izany i Abdoulaye Bathily mpanolotsaina manokan’ny sekretera jeneralin’ny firenena mikambana sy Ramtane Lamamra solontenan’ny vondrona Afrikanina ary Joaquim Chissano avvy amin’ny SADC.